Dalagaawwan kaasu mul'isi - LibreOffice Help
Sajoo kamshaa durtii galmeewwan kaasaa kamshaa barreessa fi calc dhaamsuu fi ibsuu dandeessa
7 Sararaa Unkaa akka feetee
9 Citaa Deloo
10 Geengoo Muraa
12 Sochii Barruu
14 Bobboca bu'uraa
15 Bobboca mallatoolee
16 Xiyyoota garee
17 Taattoo yaa'aa
19 Urjiilee fi Faajjiilee
20 Hojii bocquu kuusa faayaa
20.1 Faayilii Irraa
20.2 Extrusion Banaa/Dhaamsaa
20.3 Gargaarsa Afaan Eeshiyaa
20.4 Balballoomiiwwan Sarjinaa
20.5 Barruu Sarjinaa
Yoo wantoota galmee ammee filatte.Wanta filuuf,wanta xiyya waliin jiru cuqaasi.Wanta tokkoo ol filuuf,goodayyaa filannoo naannoo wantootaa jiru harkisi.Wanta gara filannotti dabaluuf jijjiirraa gadqabi akkasumas wanta cuqaasi
Iddoo galmee ammee harkisuu keessatti sarara sirrii fakkaasaa. Sarara gara digrii 45 ijaaruf ,wayta harkistu jijjirraa gadqabi.
Barruu sarararra galchuuf, sarara lama cuqaasi akkasumas barruu kee barreessi ykn maxxansi. kallattiin barruu kallatti sarara fakkaasuf itti harkistuun walsima. Sarara dhoksuuf, Mul'atala sanduuqa akkaataa sarara keessaa kabala Amaloota Wanta Fakkaasaa irraa fili.
Iddoo galmee ammee itti harkisuu barbaaddanitti reektaangilii kaasaa. Arfakkuu fakkaasuf, yeroo harkistu jijjiirraa gad qabi. Iddoo xiyyoo reektaangilii kaa'uu barbaadde cuqaasi, akkasumas gara hammamtaa barbaadduu harkisi.
Iddoo galmee ammee harkisuu barbaadetti oval fakkaasa. Iddoo oval fakkaasuu barbaadetti cuqaasi,akkasumas hammamtaa barbaadde harkisi.Geengoo fakkaasuf,wayta harkistu jijjiirraa gadqabi.
Sarara ciccita sarara sirrii walfaanee qabate fakkaasaa. Cita sararaa fakkaasuf harkisi,dhuma cita sararaa ibsuf cuqaasi,akkasumas cita sarara haaraa fakkaasuf harkisi. Sarara fakkaasaa xumuruuf lama cuqaasi.Boca cufamaa uumuf,tuqaa jalqaba sararichaa lama cuqaasi.
Yeroo rogaddee tuqaa haaraa kofa digrii 45 iddoo qabsiisuf fakkaasnu furtuu jijjiirraa gad qabi
The Tuqaalee gulaalliihaalata tuqaalee rogaddee tokko tokkoon fooyyessuuf haala miidhagaan si dandeessisan.
Draws a smooth Bezier curve. Iddoo qonyoo jalqabuu barbaaddutti cuqaasi,harkisi,gaddhiisi,akkasumas iddoo qonyoo itti xumuruu barbaaddetti qaree siiqsi akkasumas cuqaasi. Qaree siiqsi akkasumas cita sarara sirrii qonyootti dabaluuf deebi'ii cuqaasi. Qonyoo fakkaasaa xumuruuf lama cuqaasi. Boca cufamaa uumuf,tuqaa jalqaba wantichaa lama cuqaasi. Golboon qonyoo fageenya harkifameen tilmaamama.
Sararaa Unkaa akka feetee
Iddoo galmee ammee keessatti harkistutti sarara akka feetee fakkaasaa.Sarara xumuruuf,qabduu hantuutee gad dhiisi.Boca cufaa fakkaasuuf,qabduu hantuutee jalqaba tuqaa sararichaa bira jirtu gaddhiisi.
Golboo galmee ammee keessaa jirtu fakkaasaa.Golboo fakkaasuuf,ovalii hammamtaa barbaaddutti harkisi,akkasumas tuqaa jalqaba golboo ibsu cuqaasi.Qaree kee iddoo tuqaa xumuraa kaa'uu dandeessutti siiqsi akkasumas cuqaasi. Ovalii irratti cuqaasuu hin barbaachisu. Golboo geengoo irratti hundoofte fakkaasuuf,wayita harkistutti jijjiirraa gad qabi.
Boca guutame kan golboo ovaalii ibsame fi galmee ammee sararota raadiyeesii lamaan keessaa fakkaasuf. Deeloo luulloo fakkaasuf, ovaalii hammamtaa barbaadetti harkisi, akkasumas sarara raadiyesii jalqaba ibsu cuqaasuu. Qaree kee iddoo sarara raadiyeesii lammaffa kaa'u barbaaddetti siiqsi akkasumas cuqaasi. Yoo ovaalii cuqaasu hin barbaanne. Deloo geengoo fakkaasuf, yeroo harkistu jijjirraa gadqabi.
Boca guutame kan golboo geengotiin ibsame fi galmee ammee sararota raadiyeesii lamaan keessaa fakkaasuf. Cita geengoo fakkaasuf, geengoo hammamtaa barbaadetti harkisi, akkasumas sarara raadiyesii xumuraa ibsu cuqaasuu. Qaree kee iddoo sarara xumura diyaameetirii kaa'u barbaaddetti siiqsi akkasumas cuqaasi. Yoo geengoo cuqaasu hin barbaanne. Deloo geengoo fakkaasuf, yeroo harkistu jijjirraa gadqabi.
Iddoo galmee ammee keessa harkisnutti sanduuqa barruu kallattii barruu surdalaa waliin fakkaasaa. Sanduuqaa Barruu gara hammamtaa galmee keessatti eessattuu barbaadduu harkisi,akkasumas barruu kee barreessi ykn maxxansi. Barruu marfame argachuuf sanduuqa barruu marsi.
Kallatti surdala barruu sochii barruu waliin gara galmee ammeetti saagaa.
Sarara balballoomii reektaangiliin keessatti dhumatu kallattii surdala barruu iddoo galmee ammeetti harkifamu wajjiin fakkaasaa.Qabannoo balballoomii gara hammamtaa balballoomiitti harkisi.Barruu dabaluuf, qarree balballoomii cuqaasi,akkasumas barruu kee barreessi ykn maxxansi. Balballoomii rektaangulaa'a gara balballoomii marfatatti jijjiruf,wayita qarree gara harkaa jijjiire qabannoo moggee guddaa harkisi.
Tuqaalee fakkaasa keetirraa akka gulaaltu si dandeessa
Hojii bocquu kuusa faayaa
cuqaasi Kuusaa Faayaa Dalaga bocquu
Wantoota filatameef taatewwan iswiichii gara 3D banaa fi dhaamsaa
These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in Tools - Options' - Language Settings - Languages'.
Sarara balballoomii reektaangiliin keessatti dhumatu kallattii sarjaa barruu iddoo galmee ammeetti harkifamu wajjiin fakkaasaa.Qabannoo balballoomii gara hammamtaa balballoomiitti harkisi. Barruu dabaluuf, qarree balballoomii cuqaasi, akkasumas barruu kee barreessi ykn maxxansi.Balballoomii reektaangulaa'aa gara balballoomii marfametti jijjiiruf,wayita qareen gara harkaa jijjiirame qabannoo moggee guddaa harkisi. wayita gargaarsi Afaan Eeshiyaa argame qofa mul'achuu danda'a.
Iddoo kallattii barruu sarjinaa sanduuqa barruu waliin galmee ammee keessatti cuqaasnu ykn harkifnu fakkaasaa. Galmee keessaa eessayyuu cuqaasi, akkasumas barruu kee barreessi ykn maxxansi. Gara iddoo barruu dabaluu barbaaddetti qaree siiqsuu dandeessa, Sanduuqa barruu harkisi, akkasumas barruu kee barreessi ykn maxxansi. Wayita gargaarsi Afaan Eeshiyaa argame qofa mul'achuu danda'a.
Qacceewwan kabala Fakkaasaa Wajjiin hojjatan.
Retrieved from "https://help.libreoffice.org/index.php?title=Common/Show_Draw_Functions/om&oldid=1735586"
This page was last edited 14:18:47, 2016-12-27 by LibreOffice Help user WikiSysop.